Shanta isbeddel oo wanaagsan ee jacaylka jirkaaga ku sameeyo
Home Hoyga Nolosha Shanta isbeddel ee wanaagsan ee jacaylka uu jirkaaga ku sameeyo
Waxaan halkan ku soo qaadanaynaa qaababka uu jacaylka jirkaaga u bedello;
Jacaylka waa waxa qof walba uu jecelyahay in uu mar uun dareemo, qof walbana waxaa uu rajeeyaa in uu ku noolado nolol jacayl iyo farxad leh.
1 – Jacaylka wuxuu jirkaaga siiyaa farxad
Marka aad ka fakarayso qofka aad jeceshahay, jirkaaga wuxuu soo saara hormoon-ka (dopamine) sababta u ah dareenka farxadda. Maadadan jirkaaga uu soo bixiyo waxay ka turjumaysaa waxa maskaxdaada ku jiro, sidaa darteed isbeddelka ku dhacaa maskaxdaada iyo jirkaagaba ayaa ah mid farxadeed kaas oo ka socda jacaylka aad u qaaday lamaanaha qanciyay naftaada. Maadadan farxadda dhalisa ayaa sidoo kale jirka soo saara marka aad cunnaysid cunto aad u macaan.
2 – Jacaylka wuxuu yareeyaa dhiig-kar ka
Badanaa farxad iyo wanaag ayaa dhex yaalla labada qof ee is jecel taas oo abuurta xaalad degenaan. Nolosha jacaylka ku dhisan ayaa faaiido badan u leh qofka dhiig-karka qaba, degenaanta iyo farxada ayaa hoos u dhigga fursada ah in dhiigga uu ku kaco qofka qaba dhiig-karka maadaam aysan jirin khilaaf iyo muran adag kaas oo dhib u keeni kara qofka la dhibtoonaya dhiig-karka.
3- Jacaylka wuxuu kor u qaadaa dulqaadka aad u leedahay xanuunka
Cilmi-baarayaasha ayaa ogaaday marka aad aragtid ama aad eegeysid qofka aad jeceshahay, maskaxdaada ayaa soo deysa maado hoos u dhigeysa dareenkaaga xanuunka. Inkastoo fiirinta sawirka qofka aad jeceshahay uusan awoodin in uu xanuunka kaaga ilaaliyo sida kabaabisada, way fiicantahay in aad ogaatid qofka aad jeceshay, haba iska yaraatee, uu kaa baabi’in karo xanuun aad dareemeysay.
4- Jacaylka wuxuu horumariyaa caafimaadka jirkaaga
Waxaa jira qaabab badan uu caafimaadka jirkaaga ku horumaro hadii Jacayl uu kula soo darso, waxaa ka mid ah qaababka uu ku horumari karo, in caafimaadka qalbigaaga uu wanaagsanaado, waxaa aad u fiicnaada difaaca jirkaaga, waxaa suurtogal ah in aad ka shaqaysid dhimista miisaanka jirkaaga taas oo aad u horumarinaysa caafimaadka jirkaaga.
5- Jacaylka wuxuu adkeeyaa lafaha jirka
Cilmi-baaris ayaa tilmaamtay in ragga haysta nolol jacayl ku dhisan ay ka lafa adagyihiin ragga kale. Cilmi-baareyaasha ayaa la yaabay sababta keentay arintaas. Waxay u badiyeen in ay tahay arin dabiici ah amaba sababtu tahay in ragga ku jira xiriirka jacayl ay jirkooda si fiican u xanaaneeyaan.
Next article7 arrimood oo lamaanaha u sahlaya in ay waligood wada joogaan